Hotontosaina any Ouganda amin’ny 6-13 jona ho avy izao ny fifaninanana ho an’ny vondrona 1B, izay misy antsika sy i Ouganda, Côte d’Ivoire ary Zimbaboe. « Tsy maintsy atrehantsika avokoa ireo fifaninanana rehetra iraisam-pirenena misy antsika min’ity taona ity. Atao fanamby izany ary hiezaka izahay hitady ny hoenti-manana ho amin’izany », hoy i Marcel Joseph Rakotomalala, filohan’ny federasiona malagasin’ny Rugby.
Hizara roa lehibe ireo fifaninanana iraisam-pirenena amin’ity dia ny eo anivon’i Afrika sy ary amin’ny Ranomasimbe Indianina. Horaisin’i Mahamasina amin’ny 14 mey ho avy izao ny fiadiana ny ho tompondakan’ny Ranomasimbe Indianina, izay handraisan’i Mayotte, Maorisy, La Réunion ary Madagasikara anjara. Ankoatra an’io dia hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena atsy La Réunion ihany koa ny Makis vehivavy sy junior amin’ny 24-26 jona ho avy izao.